माउण्डएभरेष्ट तिन पटक चढिसके साउथबाट दुईपटक नर्थबाट एकपटक – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
माउण्डएभरेष्ट तिन पटक चढिसके साउथबाट दुईपटक नर्थबाट एकपटक
असार ८, २०७४ १०:३९ मा प्रकाशित
एक साहासी नेपाली महिला, सफल पर्वतारोहि,डरको अगाडि जित हुन्छ भने जस्तै उनले सन् २००६ देखि आजसम्म डरलाई जितदै आईरहेकि छिन् । उनी ओखलढुगां जिल्लामा जन्मि २३ वर्षको उमेरदेखि हिमाल आरोहण यात्रा सुरुगरी विश्वको सर्वच्च शिखर सगरमाथा ८८४८ मिटर विश्वको दोस्रो हिमाल सभाग्या हिमाल ८६११ मिटर लगायत दर्जनौ हिमालहरुको सफल आरोहण गरेर नेपाल र नेपालीको शिर उच्च पार्न सफल माया शेर्पासंग ईसरोकार संवाददाता रोमनी राईले गरेको संवादको संसोदित अशं ः
तपाईलाई ईसरोकारको अन्तवार्तामा स्वागत छ ।
पहिलो तपाईको हिमाल आरोहण यात्रा कुन हिमालबाट सुरु भयो ?कत्ती सालमा तपाईको उमेर कत्ति थियो त्यो बेला, अहिले कत्ती वर्ष हुनु भयो ?
सन् २००३ मा माउण्ड अमाडोब्लम ६८१२ मि.बाट मैले पहिलो हिमाल यात्रा सुरु गरे । मेरो उमेर २३ वर्षको थियो,अहिले ३७ ।
अहिलेसम्म कत्ती वटा हिमालहरु आरोहण गरी सक्नु भयो ?
साना ठूलो गरेर १२ वटा जत्ती, माउण्डएभरेष्ट तिन पटक चढिसके साउथबाट दुईपटक नर्थबाट एकपटक ।
हिमाल आरोहण गर्ने प्रेरणा चाहि कसरी पाउनु भएको थियो ?
प्ररणा भन्दा पनि म चाहि सानोदेखि नै केटाहरुले गर्ने कामहरुप्रति रुचि राख्थे, आटिलो कामहरु गर्न मन लाग्ने भएकोले गर्दा यो यात्रा रोजेको हो ।तर प्रेरणा भनेर कुनै त्यस्तो व्यक्ति छैन ।
तपाईको परिवारमा अरु पनि छन् कि हिमाल आरोहण गर्ने तपाई नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ ?
मेरो परिवारमा अरु कोहि छैनन्, म नै पहिलो हिमाल आरोहि हुँ ।
हिमाल आरोहण गर्ने तपाईमा यत्ती धेरै साहास चाहि कत्ताबाट आउँछ ?
मेरो इच्छा नै मेरो साहास हो ।
एउटा हिमालको सफल आरोहण गर्न लगभग कत्ति दिन लाग्छ ?
आठ हजार भन्दा माथिको चढ्न ४५ दिनदेखि दुई महिना लाग्छ, सात हजार भन्दा होचो चाहि एक महिना लाग्छ ।
तपाईलाई कहिल्य काहि डर लाग्दैन हिमाल आरोहण गर्दैगर्दा ? आजसम्मको यात्रामा कुनै त्यस्तो अप्रियदुर्घटनाहरु भएका छन् ?
कहिले काहि मौसम एकदमै बिग्रदा डर लाग्छ, तर आजसम्म मेरो लागि त्यस्तो अप्रीयघट्नाहरु चाहि भएको छैन कहिलेकाहि मौसमको कारणले बिरामि हुन्छु तरपनि त्यस्तो घट्ना छैन ।
तपाईले यहि यात्रा रोज्नुको उद्देश्य चाहि के हो ?
मलाई घुम्न एकदमै मनपर्ने भएकोले र मुख्य कुरा चाहि म विश्वलाई एउटा सन्देश दिन चाहान छु कि महिलाहरुले पनि हरेक काम गर्न सक्छन्
हिमाल आरोहण गर्दैगर्दा तपाईलाई कस्तो अनुभव हुन्छ ? यो यात्राबाट कत्तीको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नयाँ–नयाँ हिमाल मेरो लागि एकदमै चासो हुन्छ, यो भन्दा अर्को क्याम्प कस्तो होला अझै अर्को कस्तो होला लाग्छ । म एकदमै सन्तुष्ट छु मैले रोजेको यात्राबाट ।
तपाईको परिवारबाट कत्तीको सहयोग पाउनु भएको छ ?
मेरो परिवारको धेरै नै सहयोग छ, साथै मेरो जीवन साथि पनि मेरै क्षेत्रको हुनु भएकोले पनि मलाई हरेक क्षेत्रबाट पुर्ण सहायोग मिलेको छ ।तर पछिल्लो समयमा आएर चाहि मेरो परिवारहरु डराउन थाल्नु भएको छ त्यसैले सबैले अब यो यात्रा छोडभन्दै हुनुहन्छ ।
यो यात्राले तपाईलाई कत्तीको परिचित बनाएको छ ?केके उपलब्धिहरु प््रााप्त गरे लाग्छ ?
यो क्षेत्रमा परिचित भएको छु लाग्छ म एक महिला भएको कारण त्यहिमाथि ८ हजार भन्दा माथिको हिमाल चढ्ने महिलाहरुको संख्या कमै छ, मेरो नाम आजसम्म टपमै छ, । देशविदेशमा हिमाल चढ्ने आरोहि हो भनेर चिन्छन्, धेरै कुराहरु सिक्ने मैका पाएको छु, एउटा साधरण परिवारको मान्छे आज देशविदेस घुम्न पाएको छु, सायद मैले यो पेसा नअंगालेको भए एउटा साधरण महिला भएर सिमित घरजम चलाएर बस्थे होला त्यसैले धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेको छु ।
सबै भन्दा धेरै खुसि चाहि तपाईलाई कुन बेला लाग्छ ? कुनै त्यस्तो अनुभव छ किन मैले यो यात्रा रोजे छु भनेर दुःखी हुनु परेको ?
मलाई सबै भन्दा धेरै खुसि त्यत्तीबेला लाग्छ जब सफल हिमाल आरोहण गरेर नेपालको नाम राखेर घरभित्र पस्छु त्यो समय मेरो जीवन कै महत्वपूर्ण हो, आफ्नो खुसिमा अरु खुसि भईदिदा । अनि जब हिमालमा मौसम बिग्रन्छ र म बिरामी हुन्छु त्यो बेलाचाहि किन यस्तो यात्रा रोजे छु भन्ने लाग्छ र दुःखी पनि हुन्छु ।
तपाईले देशविदेसमा दर्जनौ हिमालहरुको सफल आरोहण गरी नेपालको नाम राख्न सफल हुनु भएको छ, आजसम्म आइपुग्दा राज्यबाट केहि साथसहयोग अनि कुनै सम्मान प्राप्त गर्नु भएको छ ?
मेरो यो १४ वर्षसम्मको यात्रामा आजसम्म कुनै सहयोग,सम्मान केहि पाएको छैन र मलाई आसा पनि छैन सरकार आफ्mैमा व्यस्त छ, को के गर्दै छ मतलव छैन, र म एक नेपाली नागरिक भएकोले मेरो देशको लागि मेरो कर्तव्य हो सम्झि सधै मेरो देशको नाम राख्न चाहान छु । मलाई राज्यसंग कुनै गुनासो पनि छैन ।
हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने खर्चहरु चाहि आजसम्म तपाईले कसरी प्रोभाइट् गर्दै आउनु भएको छ ?
आजसम्म मैले जत्ती पनि हिमाल आरोहण गरे सुरुसुरुमा कुनै हिमाल आरोहण गर्दा एउटा कामदारको रुपमा गरे नाम र दाम पनि कमाए र अहिले चाहि आफै पनि अर्गनाइज् गर्ने गर्छु र हाम्रो एउटा सानो महिलाहरुको टिम छ त्यसमा चाहि महिलाहरुको लागि मात्रै हो र त्यसको लागि प्रायोजकहरु खोज्ने कहिले आफै तिर्न यसरी नै चलिरा छ ।
भर्खरै तपाईले कुन हिमालको आरोहण गरेर फर्किनु भएको हो ?
विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कंञ्चनजंगा तर म एकदमै दुःखि छु, किनभने समिटमा पुगेर अलिकति डोरिले पुगेन गाईटहरुको लापारवाहिले हो, अथवा उनीहरु थाकेर के हो के भन्नु । हामि सबै फिट थियौ‘,मौसम राम्रो थियो, हाम्रो मेहेनत खेर गयो कंञ्चनजगां ८५८६ मिटरमा हामि ८२०० मिटर सम्म चढिसकको थियौ‘ ।
तपाईलाई एकदमै मनदेखिे कुनै त्यस्तो हिमालको आरोहण गर्न मनलागेको हिमाल ?
छ मलाई अन्नपूर्ण हिमाल चढ्न मन छ, जुन चाहि एकदमै गाह्रो मानिन्छ त्यसैले पनि ।
अब कहिल्यसम्म यो यात्रालाई निरन्तरता दिनु हुन्छ ?
मेरो शरिरले जहिल्यसम्म साथ दिन्छ म निरन्तरता दिने सोचमा छु ।